I-Red Nose Pitbull: Okufanele Ukwazi Ngaphambi Kokuthenga - Izinhlobo
I-Red Nose Pitbull: Okufanele Ukwazi Ngaphambi Kokuthenga
Kungenzeka ukuthi uke wezwa nge-red reindeer ebomvu kodwa kuthiwani ngeRed Nose Pitbull?
I-Red Nose Pitbull iyi-American Pitbull Terrier ebomvu enoboya obomvu nebomvu.
Bangenye ye- Pitbulls ethandwa kakhulu azungeze futhi njengamanye ama-Pitbulls athembeke kakhulu futhi ayavikela ..
Ngokuphikisana nenkolelo evamile lena akuyona inja enonya. Noma ngubani ochithe isikhathi esithile nalolu hlobo uyazi ukuthi empeleni zingenye yezinja ezimnandi kakhulu futhi ezithobekile.
Ngabe ucabanga ukuthi iRed Nose Pitbull ingaba yinto entsha enhle yokwengeza ekhaya lakho?
Qhubeka ufunde ukuze ufunde konke odinga ukukwazi ngalolu hlobo ...
Impumulo Ebomvu Pitbull Shazi
Ukubuka konke okubomvu kwekhala elibomvu
Ibiza Malini Ikhala Elibomvu I-Pitbull?
Ukubukeka Kwempumulo Ebomvu
Umhlahlandlela Wokunakekelwa Kwe-Red Nose Pitbull
Ungayiqeqesha Kanjani iRednose Pitbull Terriers
Le Mpumulo Ebomvu imnandi njengoshukela futhi iyathanda ukuzungezwa ngumndeni wayo.
I-Red Nose Pitbull iyinja ebomvu ye-Pitbull ebomvu enekhala elibomvu ukufanisa. Ngenkathi ama-Pitbulls eza ngemibala eminingi ehlukene i-Red Nose ingenye yezidume kakhulu. Lezi zinja azaziwa nje ngamakhala abo abomvu kepha futhi ngezinhliziyo zazo ezinkulu nemiphefumulo emnene.
Ukuthandwa: # 3.
Okukhethekile: Umngane / Ukusebenza.
Isisindo: Amakhilogremu angama-30-60.
Intengo: $ 450- $ 2000.
Ubuntu: Unesibindi, uyathandeka futhi uqotho.
Intengo : $ 2000- $ 5000
Isikhathi sokuphila : Iminyaka engu-10-13
Usayizi : 30-150 amakhilogremu
Umsebenzi : Ephakathi / Ephakeme
Intengo : $ 300- $ 2000
Usayizi : 22-40 amakhilogremu
Isikhathi sokuphila : Iminyaka engu-10-15
Usayizi : 30-60 amakhilogremu
Ukuthandwa kwe-American Pitbull Terrier kudale ukuthi kube khona i- imibala ehlukahlukene .
Enye yezinhlobo zombala ezithandwa kakhulu yiRed Nose Pitbull.
Lo mdlwane waziwa ngoboya bawo obuhle obubomvu kansundu nekhala lesinamoni elinombala ukufana.
Zinomzimba oqinile futhi zihlala ziziphatha ngendlela enokuzethemba.
Ngokudabukisayo lolu hlobo lwezinja lube nenkinga edlule njengoba ekuqaleni lwalukhuliselwe ukulunywa kwezinkunzi nokulwa nenja. Lokhu kungeze isisindo kuphela ku- idumela labo njengezinja ezinolaka .
Ngenhlanhla ngemuva kokuthi ukulwa nokulwa kwezinja sekuvinjelwe abantu baqala ukubona amandla weqiniso kulezi Terriers ezisebenza kanzima.
Iqiniso ukuthi le pooch isithandwa, hhayi isilwi.
Le goofball enobungane futhi ethandekayo iyathanda ukwenza njengomdlwane omkhulu.
Unothando olukhulu futhi unobuqili.
Ungaqeqeshwa ukuvikela ikhaya lakho.
Omunye wemibala elula yoboya ongayithola.
Inja yokusebenza nenhloso yomndeni enhle kakhulu.
Zivinjelwe ezindaweni ezithile.
Ubhekene nedumela elibi.
Izidingo zokuxhumana nabantu impilo yakho yonke.
Ayizwani nezinye izinhlobo.
I-Red Nose Pitbull yakho izolunga eceleni kombhede wakho ubusuku bonke.
Bazobe belinde nobabili ukuthi baqale usuku ndawonye.
Ukudla kwasekuseni okuhle nokuhambahamba ngezinyawo kuyindlela engcono kakhulu yokuqala noma yiluphi usuku.
I-pooch yakho izodinga uthando oluningi nokunakwa ngaphambi kokuthi uye emsebenzini. Lapho nje bezizwa bephephile futhi beqinisekile ngokubuya kwakho bazophumula ekhreyithini labo noma kwenye indawo ephephile endlini ukuze bakulinde.
Lapho ubuya ekhaya emsebenzini emsebenzini kwasemini iPhini lakho lizokumunca ngokwanga okuyindilinga.
Bebelinde usuku lonke ukuthi uze ekhaya bazozijabulisa.
Manje yisikhathi sokudlala.
Thatha inja yakho uye nayo epaki ukuyodlala ukulanda noma ukubamba noma ukubayekela bagijime nabangane babo abanezinyawo ezine.
Ngenkathi udlala nabangani babo inja yakho izokuqinisekisa ukuthi nawe uyingxenye yobumnandi. Nizobe nizijabulisa kakhulu ndawonye ukuthi enye intambama izondiza.
Uma ubuya ekhaya epaki kuzoba isikhathi sedina.
Ngemuva kwalokho amaRednose Pitbull Terriers wakho ekugcineni azolungela ukuphumula nokuzilibazisa - bukela i-TV ndawonye futhi nibe nesikhathi sokuhlangana kusofa. Ukuhlwa nokuphumula kuthakazelelwa kakhulu ngemuva kosuku olude lomsebenzi nokudlala.
Ngesikhathi sokulala umngani wakho obomvu wamakhala uzokujoyina eceleni kombhede wakho noma azigoqe phansi phansi embhedeni wakho.
Uhlobo lwe-American Pitbull Terrier lwaqala ukukhuliswa eNgilandi.
Ukusuka lapha uPitbull waya e-Ireland lapho iRed Nose Pitbull yazalelwa khona okokuqala.
Igama Pitbull liyireferensi yabo indima yokuqala njengesiyingi sezinkabi . Amaphakethe alezi zinja abekwa enkundleni ngenkunzi eyodwa futhi izixuku zibhekiwe njengoba izinja zizozama ukwehlisa le nkunzi.
Izinja ezizalelwe ukuhlaselwa kuphela ezingaphatha umsebenzi onjalo ukuze abafuyi bahlanganise ngenhloso izinja ezinolaka kakhulu.
Izinja zaqeqeshwa futhi ukuba nolaka zisebenzisa isijeziso somzimba esibuhlungu nesiyalo.
Lapho ukukhishwa kwezinkunzi kuvinjelwe ukugxila ishintshelwe ekubhekaneni nenja .
Ngenhlanhla lo mkhuba owesabekayo manje uvinjelwe kodwa idumela likaPitbull lokuba ngumlwi ononya lisale.
Ngenkathi ukuthandwa kwalolu hlobo kukhula eMelika ekugcineni banikwa igama elithi American Pitbull Terrier.
Kuyadabukisa ukuthi lolu hlobo lusavinjelwe komasipala abaningi.
Uhlobo lukhonjwe ngamanga njengesilwane esiyingozi sokuhlasela.
Umsebenzi owenziwayo ukusiza lolu hlobo ukunqoba idumela lalo elingafanele futhi zala umthetho othize kuya ngokuya kuncipha unyaka ngamunye.
Sethemba ukuthi eminyakeni ezayo ukuqwashiswa okwanele kukhuliswa ukukhombisa ubunjalo beqiniso balolu hlobo.
I-Red Nose Pitbull empeleni ivela e-Ireland, hhayi e-United States.
Ngenkathi ukubukeka kwabo okubabazekayo kubenza bakhethe ukuthandwa yinja yokuqapha kungenzeka kakhulu ukuthi babe ngumngane womuntu kunokuzama ukwethusa umuntu.
Ama-Pitbulls ayekade aziwa njengezinja ezinakekela izingane ngenxa yothando lwazo lwezingane. Abanikazi abaningi baze bathembela izinja zabo ngomsebenzi ongekho emthethweni wokugcina izingane.
Ngeshwa lolu hlobo lokuhlwaya lungenye yezinhloso ezijwayelekile zomthetho othize wohlobo oluthile. Amaqembu amaningi ezishoshovu azinikele ekuqwashiseni ngemvelo eyiqiniso yePitbull futhi aqeda ukuvinjelwa komasipala kulolu hlobo.
I-Red Nose ngomunye wemibala eminingi eyingqayizivele lolu hlobo olungaba nayo - ungaluthola lolu hlobo cishe kunoma imuphi umbala (kufaka phakathi i-blue ne-brindle).
Ngokudabukisayo lolu hlobo alwamukelwa yiAmerican Kennel Club ngenxa yesikhathi esidlule esinezinkinga.
IRed Nose Pitbull ingenye ye- izinja ezimnandi kakhulu .
Bathanda nje ukuchitha isikhathi nomndeni wabo futhi bazokujabulela ukuba yisikhungo sokunakwa.
Njengezinye izinhlobo ezisebenzayo yize zisebenza kakhulu futhi zidinga ukugcinwa zimatasa.
Ngenkathi bekujabulela ukuphumula kuzodingeka bachithe usuku olude bedlala ngaphambi kokuba bakulungele ukusonga kusofa.
Bayayithokozela imidlalo yakudala ye-doggie efana nokulanda kodwa futhi bayathanda ukushesha kanye ne-rally.
Kufanele ulindele umsindo omncane lapho le pooch izizwa ijabule noma idlala, noma uma kukhona okungahambi kahle endlini.
Kodwa-ke uPitbull oqeqeshwe kahle akufanele nanini akhonkothe ​​komakhelwane noma kwezinye izilwane.
Ngokuqondene nomphakathi kufanele qala ukuzijabulisa kubo njengomdlwane.
Ukuzijabulisa okufanele nabanye abantu nezinja kubalulekile ukugcina le pooch ekuziphatheni kwayo okuhle kakhulu. Umgodi uyinja yenhlalo ethanda ukunakwa nobungani.
Khumbula nje ukuthi le nja ayihlangani kahle futhi ingajaha izinja namakati amancane.
Noma yikuphi I-Pitbull ekhombisa ulaka noma odudula abanye nxazonke kufanele baqeqeshwe ngale ndlela yokuziphatha ngokushesha okukhulu.
Imidlwane emincane idlala ukuluma ukuze ihlole amazinyo ayo amasha, kuyilapho inja endala ingaluma uma izwa inovalo noma ikhathazekile.
Imodeli iRed Nose Pitbull inobungani, inhlalo futhi ihlakaniphe kakhulu.
Benza inja yomndeni enhle futhi bazokujabulela ukuba nezingane ezizodlala nabo. Lolu hlobo luhle kakhulu emibhangqwaneni noma emindenini enezingane ezingaphezu kweminyaka engu-6 lapho izonikezwa khona uthando oluningi nokunakwa usuku lonke.
Uma ukhombisa le nja uthando nenhlonipho ebafanele bazokunikeza ukwethembeka okungafi.
Njengoba iRed Nose Pitbull ijwayelekile ishibhile kuneminye imibala.
Kufanele ulindele ukukhokha cishe u- $ 1000 ngomdlwane.
Intengo yokuqala incike ekutheni umthola kuphi umngane wakho omusha.
Endaweni yokukhosela uzokhokha imali engange- $ 350 ye-Red Nose kanti imali ezotholwa izosiza ekunakekeleni ezinye izilwane.
Njengoba umbala utholakala kabanzi kakhulu ukubheja okungcono kakhulu kothile ofuna i-Pitbull kwisabelomali.
Umdlwane $ 1000- $ 2000
Umuntu omdala $ 600- $ 1000
Ukutholwa $ 350- $ 450
I-Red Nose Pitbull ingenye yemibala ejwayelekile yePitbull ngakho-ke imvamisa iba yiPitbull ebiza kakhulu.
Kusuka kumfuyi kufanele ulindele ukukhokha okungenani u- $ 1,000 ngomdlwane weRed Nose.
Uma lokhu kubiza kakhulu kuwe bese ucabanga ukukuthola endaweni yokukhosela - ngokudabukisayo lolu hlobo lungesinye sezilwane ezifuywayo ezivame kakhulu ezweni.
Uzodinga ukubhekela izinto ezibalulekile kusabelomali sakho futhi. Izinto ezifana nehhanisi, ikesi lezinja namathoyizi zingangeza kalula amanye ama- $ 250 ezindlekweni eziphelele.
Le nja ayazi ukuthi amandla abo azodabula amathoyizi amaningi. Kufanele ulindele ukuchitha okungenani u- $ 65 njalo ezinyangeni ezimbalwa ukufaka amanye amathoyizi okungenzeka ukuthi iPit yakho iwonakalisile.
Ngokumangazayo le nja ayinayo indlela esemthethweni yokuzalanisa.
Noma kunjalo ungalindela ukuthi inja yemisipha esezingeni eliphakathi nendawo .
Banekhanda elibanzi elinesifonyo esibanzi nokumamatheka okukhulu.
Izindlebe zazo zingama ziqonde noma zibe nesibaya esincane kepha zona akufanele kunqampulwe . Njengoba nje igama labo liphakamisa ukuthi banekhala elibomvu ngokubomvu futhi lokhu kungabonakala kufiphele kuye ngesizini.
Kukonke lokhu kuyinja eqinile futhi enesiqiniseko sokubuka.
Ungalindela ukuthi i-Red Nose yesilisa ime phakathi kwamasentimitha angu-18-21 ubude futhi inesisindo esiphakathi kwamakhilogremu angama-35-60.
Abesifazane bancanyana nje futhi bame phakathi kwama-intshi ayi-17-20 futhi banesisindo esiphakathi kwamakhilogremu angama-30-50.
Ama-Pitbulls amakhulu ikakhulukazi angakhula aze afike kumakhilogremu angama-70 uma kungowesilisa kanye namaphawundi angama-60 uma kungabesifazane.
Le nja inengubo enhle ebomvu ngokubomvu.
Ngezinye izikhathi banesisu esimhlophe nobuso futhi.
Le nja inejazi elilodwa elifushane futhi eliqinile elifushane kakhulu. Uyayizwa imisipha yale nja ngaphansi kwengubo yayo njengoba uyiphathisa.
Ngenhlanhla njengoba benoboya obufushane abachitheki kakhulu.
Ngenkathi i-Red Nose Pitbull uhlobo olukhethekile lwenja abadingi ukunakekelwa okukhethekile.
Umnikazi onothando nomusa konke le nja idinga ukujabula futhi ibe nempilo.
Le nja futhi idinga umnikazi osebenzayo ongagijima azungeze futhi adlale kahle usuku lonke. Akufanele neze bashiywe bodwa ekhaya ngaphezu kwamahora ambalwa ngesikhathi, ngakho-ke abanikazi abangekho akudingeki bafake izicelo.
Wenza isingeniso esihle ezinhlungwini zeziqhwaga futhi ngizofuna nje ukuba umngane wakho omkhulu.
Ngaphezu kwakho konke umnikazi weRed Nose Pitbull kumele azibophezele ngokuphelele ekuqeqesheni nasenhlaliswaneni ngempilo yonke yenja.
Lezi zinja zidinga okungenani ihora lokuzivocavoca usuku ngalunye.
Ungahlukanisa lokhu phakathi kokuhamba nokugijima.
Zonke izinhlobo zokuhlukumeza kufanele zigcinwe ku-leash yazo lapho ziphuma zihamba - ukudlala i-leash kufanele kwenziwe endaweni ephephile, evikelekile. Ungazihambela imizuzu engama-30 ngosuku bese ufaka imizuzu engu-30-40 yokudlala ukuqedela usuku lwenja yakho.
Ukugijima kungenye yezindlela abazithandayo zokuzigcina bephilile.
Lolu hlobo luzodlala cishe noma yini kufaka phakathi ukulanda, ukubamba kanye nomaki. Kodwa-ke bayaphumelela emhlanganweni ohlanganisa ukulalela nokushesha.
Ingqikithi Yomsebenzi Wansuku zonke: Imizuzu engama-60.
Izinga lomsebenzi: 4/5.
Umsebenzi owuthandayo: Rally.
Le Red Pitbull's ijazi elifushane futhi eliminyene Kulula kakhulu ukuzilungisa.
Ukugcina ijazi labo elibomvu likhanya uzodinga ukulixubha kanye ngesonto.
Ngesikhathi sentwasahlobo nasekwindla ungabona ezinye izinwele ezimbalwa eziwile kunokujwayelekile. Lokhu kungenxa yokuthi inja yakho ilungiselela ijazi labo lesizini. Ngalesi sikhathi uzodinga ukuwaxubha ama-2-3 ngesonto esikhundleni salokho.
Ama-Pitbulls adinga ukuhlanzwa okuningi kunokuxubha (ikakhulukazi ebusweni nasezindlebeni). Geza i-pup yakho njalo ezinyangeni ezimbalwa usebenzisa i-shampoo ephephile nenja ne-conditioner.
Uma inja yakho inezindwangu zobuso ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukugcina ubuso bayo buhlanzekile. Sebenzisa izesuli zobuso ezimnene noma isifihla-buso se-spa esinobungani ukugcina ukungcola ekuqoqeni nxazonke zekhala, amehlo nomlomo. Sika izinzipho zabo njalo emavikini ama-2 noma ama-3 bese uxubha amazinyo enja yakho kanye ngesonto. Kungaba nzima ukuthola inja yakho ukuthi ibonge isixubho ukuze ubashukumise ngomuthi wokuxubha ohlwabusayo noma ukuphatha amazinyo.
Inja esebenzayo nenemisipha enjengale idinga amaprotheni amaningi.
Empeleni amaprotheni kufanele abe isithako sokuqala ekudleni kwabo. Amaprotheni avela emithonjeni yangempela yenyama ikhuthaza isimo semisipha esinempilo nokukhula.
IRed Nose Pitbull izodinga amakholori afinyelela ku-1000 ngosuku lweproteyini ephezulu kakhulu noma inyama eluhlaza.
Ungahlukanisa lokhu kudla okungu-2 (ekuseni nakusihlwa). Ukudla okulula kakhulu kwenja yakho kufanele kunikezwe lapho kuqala ukushona ekupheleni kosuku. Ngesikhathi sokudla kwakusihlwa kulungile ukubanikeza uhhafu wenkomishi kunokuba ubanikeze inkomishi egcwele. Isidlo sabo esikhulu kunazo zonke kufanele sifike ngesikhathi sasekuseni.
Iningi lokudla kwenja kufanele lakhiwe ngamaprotheni namafutha anempilo aqhamuka emithonjeni yemvelo kunezithasiselo nemikhiqizo.
Ukuphatha kufanele kunikezwe ngamanani amancane kuphela.
Phakathi kwezinyanga ezimbili kuya kwezingu-6 umdlwane wakho uzobe usufinyelele uhhafu wesisindo somuntu omdala. Lokhu kufanele kube ngamakhilogremu angama-20-30 owesilisa namakhilogremu ayi-15-18 kowesifazane.
Inja yakho kufanele ifinyelele usayizi wayo ogcwele ngemuva nje kosuku lwabo lokuzalwa lokuqala. Okwesilisa lokhu kufanele kube phakathi kwamakhilogremu angama-40-60 (noma kuze kufike kuma-70 kumaPitbull amakhulu amakhulu). Abesifazane bazoba nesisindo esiphakathi kwamakhilogremu angama-30-50.
Ngenkathi iRed Nose Pitbull inguhlobo oluqinile kusekhona izinto ezimbalwa okudingeka uziqaphele.
Patellar ukunethezeka ukuphazamiseka okuhlangene lokho kwenzeka ikakhulukazi ezinjeni ezincane kepha kungathinta izinja eziphakathi nendawo njengePitbull. Lokhu kwenzeka lapho i-patella ingazinzile futhi ihlukaniswa kalula. Kubanga ubuhlungu nokungaphatheki kahle, izingqinamba zokuhamba kanye nokukhubazeka ekugcineni. Ukwelashwa kuncike ekutheni isimo sikusiphi isigaba kodwa ezimweni ezimbi kakhulu bazodinga ukuhlinzwa. Esigabeni 1 no-2 i-patella ingathunyelwa ngesandla. Kodwa-ke esigabeni 3 noma 4 patellar luxation cishe njalo kudinga ukuhlinzwa ukuze kulungiswe.
I-myleopathy eguquguqukayo ngesinye sezimo ezinzima kakhulu lolu hlobo olungakhula. Imvamisa kwenzeka ezinjeni okungenani ezineminyaka engu-9 ubudala. Lesi simo sidala ukuthi intambo yomgogodla yehle futhi ingaholela ekukhubazekeni okuyingxenye futhi ekugcineni. Izimpawu zokuqala zifaka ukuhudula izitho kanye nokulahlekelwa ukulinganisela nokuxhumana. Amalunga angavaleka ngezikhathi ezithile njengoba isimo siqhubeka. Ukukhubazeka kwezitho zangemuva nokulahleka okuphelele kokuhamba ekugcineni kuzolandela. Ngeshwa isimo siyabulala ngamaphesenti ayi-100.
Ingabe Ikhala Elibomvu I-Pitbull Liphila Isikhathi Eside?
I-Red Nose Pitbull ingaphila noma yikuphi phakathi kweminyaka eyishumi kuya kwengu-15.
Kufanele uqale ukuqeqesha iRednose Pitbull Terrier yakho ngokushesha nje lapho uletha umdlwane wakho ekhaya.
Ngesikhathi sokuqeqeshwa kufanele uhlale uqine kepha ungakhethi.
Ngaso sonke isikhathi phatha inja yakho ngenhlonipho edinga ukukhuthaza inhlonipho efanayo kuwe.
Isifiso semvelo sale nja ukujabulisa abanye kusho ukuthi baphendula kahle kakhulu ukuncoma ngokuziphatha okuhle. Ukuziphatha okungafanele kunakwa kakhulu njengoba umdlwane uzama nje ukunaka wena.
AmaRed Nose Pitbulls ashukunyiswa kakhulu uthando nokudumisa kunokwelashwa.
Ngakho-ke lapho beqedela umyalo ngendlela efanele badumise ngokubanika uthando nothando.
Ukuxhumana nabantu kubaluleke kakhulu kulolu hlobo. Kufanele uyise inja yakho ezindaweni lapho ingakwazi ukuxhumana ngokuphepha nabanye abantu nezinja. Isifundo sokuqeqeshelwa ubungani ePit kuzoba nzima ukusithola ngakho-ke iningi lokuqeqeshwa lizodinga ukwenziwa ekhaya.
Umdlwane wakho kufanele uhlale unendawo ephephile futhi ehlelekile yokuzihlanganisa nezinye izinja ezinobukhulu nobuntu obufanayo.
Ukuqeqesha futhi kuyindlela enhle yokuzigcina zivuselelekile.
Isizungu yisimo sengqondo sikaPitbull esingathandwa kakhulu futhi cishe ngaso sonke isikhathi siholela ekuziphatheni okulimazayo.
Intambo ukuphosa ngumdlalo omuhle kakhulu wokuqeqesha nokucija izingqondo zabo. Ngenkathi udlala ungazijayeza imiyalo efana nokuhlala, ukuhlala, ukukuphonsa bese uhamba.
Bazodinga ukugcinwa bematasa ngokwengqondo ukuvimbela noma yikuphi ukuziphatha okulimazayo.
Ungalokothi uthathe phansi ingqondo ehlakaniphile edlula lawo mehlo amancane amnandi.
Njengohlobo olukhulu lweTerrier bangaqeqeshelwa izinhlobo ezahlukahlukene zomsebenzi.
Zivame ukuqashwa njengenja yokubuka noma inja egadayo. Uhlobo luye luqeqeshwe njengenja yensizakalo noma iphoyisa i-K-9.
Ungavumeli umlando weRed Nose Pitbull ukukhohlise.
Le nja imnandi njengoshukela futhi ifuna ukuthandwa nje.
Ukuthatha lolu hlobo kuyisibopho sokuzibophezela iminyaka eyishumi okungewona wonke umuntu okwazi ukusenza.
Imindeni ezinikezele enezingane ezindala endlini izothanda umoya omnene wale nja. Abanikazi abangabodwa abaletha ikhaya elilodwa ngeke baphinde bazizwe benesizungu futhi. I-Pitbull ihlale ifuna ukwazi ukuthi ubathanda kangakanani. Uma uphatha inja yakho ngomusa ebafanele bayokuthanda futhi.
Inja kungaba yi-goofball enkulu kepha lokho akusho ukuthi abahlakaniphile.
Ukuze le nja isebenze kahle kakhulu kumele igcinwe isebenza.
Lokhu kusho ukuchitha izinsuku ezinde ngidlala imidlalo futhi ngifunda amaqhinga amasha.
I-Red Nose Pitbull ingumngane wokuphila ongasoze wamkhohlwa. Uma ungenza indawo enhliziyweni yakho ibe yinye izongena khona kanye.
Sazise noma imiphi imibuzo yakho mayelana nale Mpumulo Ebomvu esigabeni sokuphawula ngezansi ...
pit bull lab mix umdlwane
i-rottweiler lab isi-germaniel mix
i-chihuahua terrier mix izinwele ezinde